Lalam-baovao Tsarasaotra-Ivato : trano manodidina ny 10 no mety horavaina | NewsMada
Lalam-baovao Tsarasaotra-Ivato : trano manodidina ny 10 no mety horavaina
Tsy maintsy hisy ny fandravana trano hatao amin’ny fanitaran-dalana mampitohy an’i Tsarasaotra sy Ivato, hitsenana ny fihaonamben’ny tany miteny amin’ny ampahany na manontolo ny teny frantsay, eto amintsika. Manodidina ny 10 ny trano mety ho voakasik’izany.
Nihaona mivantana ary nanao fakan-kevitra tamin’ireo mponina teny Ivato izay voakasiky ny fandravana trano ny tompon’andraikitra avy amin’ny ONE, Mepat, BPPAR ary ny orinasa hanao ny asa tamin’ity herinandro ity, tao amin’ny trano malalaky ny kaominina Ivato niaraka tamin’ny tompon’andraikitra ao an-toerana.
Miandraikitra ny fiantraikan’ny fandravana sy ny fanamboarana ny fotodrafitrasa vaovao eo amin’ny lafiny tontolo iainana ny ONE. Mandinika ny onitra sy ny soso-kevitra ho an’ny mponina rava fananana kosa ny BPPAR.
Voalaza fa didim-panjakana no mandidy ny tsy maintsy hanaovana ny fakan-kevitra eny ifotony mialoha ny hanatanterahana ny asa fanamboarana. Voakasik’izany ireo tompon’ny trano tsy maintsy horavana, ireo mponina mampiasa lakan-drano na ireo mponina manodidina izay tsy maintsy hiaina anatin’ny vovoka mandritra ny fanamboarana.
Napetraka ao amin’ny kaominina sy any amin’ny fokontany ny boky lebibe roa hahafahan’ny mponina mametraka ny hetahetany na handraiketany ny fitarainany manoloana izao fanamboarana tsy maintsy hatao izao.
Rehefa vita ny fakan-kevitra eny ifotony sy ny fandinihana lalina ny fitarainan’ny mponina izay vao mivoaka ny fahazoan-dalana avy amin’ny ONE sy ny bokin’andraikitra ho an’ny orinasa hanao ny asa mivantana eny an-toerana.
Tany solon’ny tany
Mirefy 12 km ny lalana hamboarina mampitohy an’i Tsarasaotra sy Ivato. Manala ny fitohanan’ny fiara amin’ny fivoahana avy any andrefan’Antananarivo io lalana io. Mitondra fampandrosoana ho an’ny tanàna rehetra lalovany ihany koa.
« Tsy manda ny fanamboaran-dalana izahay fa manoso-kevitra kosa mba tsy hisian’ny «fandravana betsaka ety an-tanàna », raha ny fanirian’ireo mponina eny an-toerana. Tian’izy ireo raha omena tany na trano avy hatrany izy ireo hivantanany.
Eo koa ny soso-kevitra milaza fa tokony havily ny lalana mba hampihena ny fandravana. Ankoatra izany ny tokony hahatafiditra ny kaominina Ivato sy ny solontenan’ny mponina ao anatin’ny vaomiera manokana mandinika ny onitra tokony omena ny olona.
Tetsy andaniny, nampanantena ny teknisianina avy amin’ny minisitera fa handinika ireo soso-kevitra ireo. Marihina fa mpanelanelana fotsiny ihany ny kaominina Ivato fa tsy tompon’ny tetikasa. Tetikasam-panjakana io fanamboaran-dalana io ary tsy maintsy tanterahina hisian’ny fampandrosoana ary ho fitsenana ny frankofonia.